I-China 30L 50L 100L Vusum Emulsifying Mixer Umenzi kunye noMboneleli | UMaxwell
Umatshini wokugcwalisa iAerosol
Umatshini Wokwenza izixhobo
Umatshini wokugcwalisa weglue
Ukushisa Ukuxuba Tank
Umxube weShear oPhezulu
Umatshini wokufakela iilebheli
Umatshini wokugcwalisa iPowder
Shrink Umatshini wokusonga
Ukugcwalisa kwe-Tube kunye nomatshini wokuTywina
Umxube wePlani yokuCwangcisa kabini
Umxube oshukumisayo weVuvuum
Umxube weplanethi yokuHamba
I-1000 L yokuVuselela iVusum Emulsifying
I-350L 650 L Umxutyisi we-Vusum Emulsifying
I-100L 200L L yokuVuselela i-Emulsifying Mixer
I-30L 50L 100L Vusum Emulsifying Mixer
Umxube oshukumisayo weVuvuum wenziwa yiWuxi maxwell automation Technology Co, Ltd. Uyilo olukhethekileyo elebhu lwelebhu yezithambiso, amayeza, mihla le kusetyenziswa amachiza, ukutya, imveliso yemichiza, uyilo lomatshini wethu lusekwe kubuchwephesha ovela eJamani nase-Itali, umatshini wethu kulula ukusebenza, kulula ukugcinwa, ixabiso ngokuqiqayo, onke amalungu asebenzisa uphawu oludumileyo eTshayina okanye emhlabeni.
Umxutyanisi we-VEM-10L emulsifying vacuum isetyenziswa ngokubanzi kwezi mveliso zingezantsi:
Isithambiso: I-cream yobuso, i-cream yesandla, i-sunscreen cream, i-eyelash ukuya kwi-cream, i-gel yeenwele, i-lotion, i-shampoo yokuhlamba, ipolishi yesikhonkwane, i-hair conditioner njl.
Umzi-mveliso wamayeza: ioyile, isiraphu, isondlo, iimveliso zebio, unamathisele wamayeza njl.
Imveliso yokusetyenziswa kwemihla ngemihla: izinyo lokuhlamba amazinyo, iisheer, izihlangu, isepha, ivumba njl.
Umzi mveliso wokutya: iisosi, ijam, itshokholethi, ibhotolo, iiproteni zemifuno, iiproteni zezilwanyana, njl.
Umzi mveliso weKhemikhali: Ukupeyinta, i-pigment, idayi, iipende, izixanisi zesinamathisi njl njl.
Laborator Vacuum Emulsifying Mixer
I-VEM-10L Laborator Vacuum Emulsifying Mixer
Beka ezi zixhobo kwitanki ye-prox yetanki ye-preco kunye netanki yamanqanaba amanzi, emva kokuba kufudunyeziwe kwaye kuxutywe kwitanki lamanzi kunye netanki yeoyile, inokutsala izixhobo kwitanki yokuphelisa ngepompo yokuthambisa. Ukwamkela isishukumisi esiphakathi kunye neentsalela ze-Teflon ezikwi-emulsifying tank etshayela iintsalela eludongeni lwetanki ukwenza ukuba izinto ezisetyenzisiweyo zisuswe zibe yinto entsha ehlala ihleli. Emva koko izixhobo ziya kunqunyulwa, zixinzelelwe kwaye zijikeleze ngama-blade ukukhuthaza, ukuxuba kunye nokubalekela kwi-homogenizer. Ngokukhulula okunamandla, iimpembelelo kunye neziphithiphithi zangoku ukusuka kwisitovu esikhulu se-shear kunye necala lokusika elisisigxina, izixhobo zinqunyulwa kwiindawo ze-stator kunye ne-rotor kwaye ziphendukele kumasuntswana e-6nm-2um ngokukhawuleza. Kungenxa yokuba itanki yokufaka amandla isebenza phantsi kwephango, iibhubhu ezivelisa kwinkqubo yokuxuba zithathwa ngexesha.
Edlulileyo: I-5 / 10L yeLab yokuVuselela iVusum
Okulandelayo: I-100L 200L L yokuVuselela i-Emulsifying Mixer
I-JR Series i-Shear Homogenizer ephezulu
I-5 / 10L yeLab yokuVuselela iVusum
Umxube weplanethi engu-500L yeVuthi
Amachiza amayeza aMachiza aMachiza amayeza
Itekhnoloji okanye emva kwentengiso
idilesi:NO.2-300 BLOCK4, TECHNOLOGY Park, CHANGJIANG ROAD34 #, DISTRICT ENTSHA, WUXI City, JIANGSU PROVINCE, CHINA